Ubugcisa | Ucanzibe 2022
Sotheby's Kuthengiswe nje iNguqulelo yeNFT yeKhowudi eMthombo yeWebhu yeHlabathi
Udidi Ubugcisa 2022
I-NFT ibandakanya utyikityo lukaSir Tim Berners-Lee, isazinzulu sekhompyuter esaziwa ngokuba ngumqambi weWebhu eBanzi yeHlabathi.
Apho iNyaniso yeTV kunye neeMyuziyam zidibana khona: Njani iNetflix's 'Blown Away' edibene neCorning
U-Eric Meek weMyuziyam yaseCorning yeGlasi ucacisa indlela imyuziyam edlale ngayo indima ebalulekileyo 'ekuVuthweni kude,' umboniso weTV okwenyani ngoku kwiNetflix.
Iikhephu ezili-10 kwiMbali yobuGcisa ukuze zikufumane kuMoya weXesha
Khange uyifumane iKrisimesi emhlophe? Phinda ujonge la makhephu eklasikhi wokuthinta umbhiyozo weholide.
Indlela ‘Ubuhle nerhamncwa’ Ebe ngayo Isikweko Esibuhlungu SikaGawulayo
Ibali lesini, indoda yamaJuda evela eNew York eyakhokelela ku-Disney Renaissance.
Abalandeli bakaHarry Potter abakwazi ukuBamba iSnitch emva kokuba iThikmaster eQinisekisiweyo yeFan isilele kwakhona
Amatikiti ka 'Harry Potter kunye noMntwana oqalekisiweyo' aqhubeke athengiswa namhlanje, kodwa abantu abaninzi basilele ukufumana izihlalo.
Ukuba ukulungele ukunciphisa imibimbi, imigca emihle, kwaye ujonge iminyaka emncinci kunawe, nantsi eyona mibimbi ilungileyo yokuthenga i-2021.
Nantsi yonke into ekufuneka uyazi ngeArtPrize 2015
Ukhuphiswano oluvulekileyo lubuyela kunyaka we-7 kwiGrand Rapids, ngeseshoni eyongeziweyo eNew York.
Ngubani uStanislav Szukalski, uMzobi oGqwesileyo uLeonardo DiCaprio ozama ukwenza udumo?
Umbhalo weNetflix 'Umzabalazo: Ubomi kunye nobugcisa obulahlekileyo beSzukalski' ngumzamo kaLeonardo DiCaprio wokufumana udumo ngomculi opolishiweyo uStanislav Szukalski, owathi umdlali wadibana naye njengomntwana kungekudala ngaphambi kokuba asweleke emfihlakalweni.
'Ukuhlawulwa kwezibane' 9/11 Ukufakwa kufuneka kuhlale ngokusisigxina, abaququzeleli baphikisana
Usihlalo wekomiti eqikelele kwisikhumbuzo sokukhanya uthi lixesha lokuba ufakelo lube sisigxina.
Ungasondeza Kwikopi engagungqiyo 'yeSidlo sangokuhlwa' kwiQonga lezoBugcisa likaGoogle
Ukuveliswa kwakhona kwedijithali kwenziwa kwafumaneka kuGoogle yiRoyal Academy yoBugcisa eLondon.
Iphela njani Iqanda lePasika elibiza kakhulu kwihlabathi liphela kwiNtengiso yaseMelika njengeScrap Metal
I-Imperial Fabergé Egg yesiThathu, enye yamaqanda angama-50 ehonjiswe ngobunewunewu obabuyinxalenye yosapho lwasebukhosini lwaseRussia ngenkulungwane ye-19, yafunyanwa kwakhona ngumthengisi wentsimbi owathengayo ekuqaleni kweminyaka yoo-2000 kwimakethi yentakumba yaseMelika.
Ngaphakathi kwiLizwe eliDlamkileyo elingaphantsi komhlaba leArt Killer Art, apho uManson athetha khona ngeMali
Ubugcisa bababulali ababulalayo njengoRichard Ramirez, uCharles Manson noJohn Wayne Gacy ibe yinto eshushu kwimarike yokubulala engaphantsi komhlaba.
Usuku lwesihlanu lwenkampani ekhwela ukukhwela i-'Uber Ice Cream ', intsebenziswano noMcDonald's, iphele kukudana kubathengi abaninzi.
'Ukusinda kulawulo oluzenzekelayo' kubalulekile kuye nabani na othi bonke abezopolitiko bayafana. UMasha Gessen uchonga iyantlukwano phakathi kukaTrump kunye nabanye abantu bezopolitiko, esenza kucace ukuba indlela aziphethe ngayo ayinangxaki okanye iyanceda abantu baseMelika.
Iposta yePrincess Leia: Imicimbi yezomthetho ayizukugcina eli Gcisa liphuma kwimvukelo
UHayley Gilmore uthetha ngembali yakhe yobutshantliziyo, iposta yeNkosazana uLeia kunye nemicimbi yezomthetho eyalandelayo.
UTony Bennett Wapeyinta i-Nude Lady Gaga
UTony Bennett, ekubonakala ukuba uye waziphatha ngokupeyinta iminyaka eliqela, kutshanje upeyinte umzobo kaLady Gaga ehamba ze, imizobo eza kuthi kungekudala ithengiselwe isisa.
Ilifa eliKhathazekileyo likaAndy Warhol kaFarrah Fawcett Portrait
Ugqirha uRyan O'Neal uxelwe ukuba uyokuthenga kufutshane nomfanekiso kaAndy Warhol kaFarrah Fawcett, owayesakuba liqabane lakhe, nge $ 18 yezigidi.
Njenge 'Bell Jar,' Ibali elifutshane elisandula ukufunyanwa likaSylvia Plath, 'uMary Ventura kunye noBukumkani beThoba,' ujongana nomntu ophakathi ogcwele ityala lokungakwazi kulawula ikamva lakhe.
Ibali leNene elingaMangalisayo emva kukaHervé Villechaize's Udliwanondlebe lokuGqibela
USacha Gervasi, umlawuli we-HBO 'Isidlo sam sangokuhlwa noHervé,' wayeyintatheli xa wayedlan 'indlebe' nesiQithi seFantasy sikaHervé Villechaize ngo-1993. Kwamthatha iminyaka engama-25 ukuba abalise ibali lakhe.
UJohn Lithgow ‘Amabali ngentliziyo’ Uphefumla uBomi obutsha kuMboniso woMntu oMnye
'Kumabali ngentliziyo,' uJohn Lithgow uzisa uP. G. Wodehouse 'uMalume uFred Flits Ngu' kunye noLing Lardner 'wokucheba iinwele' ebomini kumdlalo obalaseleyo wendoda enye.
Sala kakuhle, PolitickerNJ.com
'Igazi' leXesha lesi-2, iziqendu 2-3: Kufuneka simemeze malunga noKevin
Yeka into oyenzayo kwaye uthenge amanzi aqaqambileyo wentaba (Ividiyo)
Apho ubukele ixesha lehlazo 7
yintoni eyona turmeric intle kwintengiso
Ukujongana kakuhle nejusi
Ihlazo lokuziphatha kwishishini 2019
ulinda thompson (imvumi)
Tim heidecker yezigidi zeedola ezigqithileyo